प्रदेशसभा सदस्य लीलाधर भट्टलाई पाँच प्रश्न ? – SidhaRekha
प्रदेशसभा सदस्य लीलाधर भट्टलाई पाँच प्रश्न ?
२०७४ पुष ५, बुधबार १५:४४ December 20, 2017
बैतडीको प्रदेशसभा निर्वाचन क्षेत्र नंं २ बाट मंसिर १० गते भएको प्रदेशसभा निर्वाचनमा आफ्ना निकटतम प्रतिस्पर्धि राप्रपाका उम्मेदवार गणेश चन्दलाई ५ हजार मत अन्तरले पछि पारेर बिजयी हुनुभएका लीलाधर भट्ट नेकपा एमाले बैतडीका जिल्ला सचिव हुन् । राजनीतिमा चर्चित युवा नेता लीलधर भट्टको जन्म २०३४ भदौ १५ गते बैतडीको श्रीकेदारमा बुवा भुरे भट्ट र आमा लक्ष्मी भट्टको कोखबाट भएको हो । समाजशास्त्र र राजनीति शास्त्रमा स्नातकोत्तर लीलाधर युवा संघको पूर्व केन्द्रीय सदस्य समेत भएर महत्वपूर्ण जिम्मेवारी बहन गरिसक्नु भएको छ । लीलाधरले भारत, थाईलैण्ड, लावश, कम्बोडिया र भियतनामको भ्रमण गरेर विश्व राजनीतिलाई नजिकबाट नियालि सक्नु भएको छ ।
सामान्य घर परिवारमा जन्मेका लीलाधर भट्ट कक्षा ६ मा पढ्ने बेला शिक्षकले राम्रो नपढाएको भन्दै स्कुल तालाबन्दी गर्थे । गाउँमा होली खेल्दा साना केटा केटीलाइ ठुलाले हेप्यो भने गाउँमा युवाहरुको फरक होली समेत बनाउने गर्थे । गरिब र कमजोर मान्छेलाई कसैले हेप्यो भने त्यसको डटेर प्रतिवाद गर्थे । २०४८ सालको प्रथम आम निर्वाचनको बेला तत्कालिन क्षेत्र नं. ३ नेकपा एमालेका सासंदका उमेदवार धनबहादुर बोहराले गाउँमा भेटघाट गर्दा कम्युनिष्ट पार्टीले गरिबहरुको हितमा काम गर्छ, यसले धनी गरिब नभनी सबैलाइ समान व्यवहार गर्छद, भन्ने कुराबाट प्रभावित भएर एमालेको पार्टी साधारण सदस्यता लिएका थिए ।
हुनेखानेहरुको कब्जामा रहेको बैतडीको राजनीतिक विरासतलाई तोड्दै पहिलो पटक बैतडीको निर्वाचन क्षेत्र नंं २ मा नेकपा एमालेलाई स्थापित गर्नु भएको छ । अब बन्ने प्रदेशस सरकाको मन्त्रीका लागि समेत चर्चामा रहेका भट्टसित समसामयिक विषयमा गोकर्ण दयालले गर्नु भएको छोटो कुराकानी :
१. बैतडीको पूरानो राजनीतिक विरासत तोडेर बिजयी हुनुभयो, कस्तो लागिरहेको छ ?
जनताले अपार माया र विश्वार गरेर बैतडीको निर्वाचन क्षेत्र नंं २ बाट पहिलो पटक नेकपा एमालेलाई बिजयी गराउनुभएको छ । चुनाव जितेपछि जनतामाझ गरेका बाचा कसरी पूरा गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा पार्टीमा व्यापक छलफल भैरहेको छ । जनमतले जिम्मेवारी बढाएको महसुश भैरहेको छ ।
२. जनतालाई खुशी पार्ने तपाईका एजेन्डा र कार्यक्रम के के हुन् ?
जिल्लामा तत्काल चलिरहेका विकास निर्माण र भौतिक पूर्वाधार के के हुन् भनेर हामीले सबै सरकारी तथा गैर सरकारी निकायसित सूचि मागेका छौं । काहाँ के अपुग हुन्छ त्यो हामीलाई भन्नुस् र राज्यबाट प्रवाह हुने सेवा सुविधा छिटो छरितो र पादर्शी ढंगले काम गर्न सबै निकायलाई सचेत गराएका छौं । सुशासन र अनुशासनलाई हामीले प्राथमिकता दिएका छौं । दुई वर्षभित्र बैतडीका प्रत्येक वडामा सडक र बिजुली बत्ती पुर्याउने पहिलो लक्ष हो । मंगलवार मात्रै बिद्युत प्राधिकरण क्षेत्रीय कार्यालयमा हामीले तत्कालै मेलौली, मुसे, कटौजपानी लगायतका क्षेत्रमा बिद्युतको सव स्टेशन राख्न माग गरेका छौं । चमेलिया र अपी हाईड्रो पावर हाम्रै क्षेत्रमा बन्ने तर बैतडीका गाउँ अध्याँरो किन ? भनेर हामीले प्रश्न गरेका छौं । दुई वर्षभित्र बैतडीका सबै वडामा बिजुली पुग्छ । सबैले ढुक्क भए हुन्छ ।
३. ठूलो संख्यामा युवाहरु विदेश पलायन भएका छन् । जिल्लमा रोजगारी छैन । कसरी विकास गर्नुहुन्छ ?
युवाहरु विदेश पलायन राज्यका लागि चुनौति बनेको छ । यो समस्या बैतडीमा पनि छ । युवाहरुलाई खाडी मुलुकको भन्दा राम्रो काम स्वदेशमै दिन सकिन्छ । त्यसका लागि हामीले बैतडीमा कृषि उद्योग, फलाम खानी, चुन ढुंगा खानी, कृषि र पशुपालन, पर्यटन विकास, धार्मीक पर्यटकीय क्षेत्र र व्यवसायमा राज्य र निजि क्षेत्रले लगानी गर्ने वातावरण मिलाउछौं । महाकाली, पश्चिम सेती र चमेललिया नदीले घेरिएको बैतडीलाई सुन्दर र संवृद्ध बनाउन म पाँच वर्ष निरन्तर खट्छु । चुनावमा हामीले जनतालाई सपना मात्र बाँडेका होईनौं, त्यो हामी यथार्थमै गरेर देखाउँछौं ।
४. बैतडीमा भईरहेका विकास निर्माणका काममा अनियमितता, कर्मचारीतन्त्रमा ढिलासुस्ती र जिम्मेवारी वहन नगर्ने जुन प्रवृत्ति छ , यो कसरी सुधार हुन्छ ?
हामी हेरिरहेका छौ, शिक्षक बिद्यालयमा नपढाई खेताला शिक्षक राखेर सरकारी तलब खाईरहेका छन् । कर्मचारी आफ्नो काममा भन्दा पनि बढी राजनीतिमा ध्यान दिईरहेका छन् । हामी कसैसित आग्रह वा पूर्वाग्रह नराखी कामको मुल्यांकलन गरेर शुन्य सहनशीलता अपनाएर यी सबै बिकृतिको अन्त्य गर्छौ ।
५. तपाईको नाम अब बन्ने प्रदेश सरकारको मन्त्रीका रुपमा पनि चर्चामा छ, कुरा के हो ?
जनमानशमा त्यो चर्चा चल्नु स्वभाविक कुरा हो । जनताले बाम गठबन्धनलाई यन्त्रो जनमत दिएका छन् । तर, पार्टीले आधिकारी निर्णय नगरुन्जेल मुख्यमन्त्री र मन्त्रीको त्यसो चर्चा गर्नुहुँदैन । पार्टीले जुन भूमिका र जिम्मेवारी दिन्छ, त्यो कुरालाई ईमान्दारी पूर्वक बहन गर्न सक्छु ।
अघिल्लोकक्षा ११ र १२ को नतिजा पनि अब ग्रेडिङ सिस्टममा
पछिल्लोप्रदेश राजधानीका लागि नेताहरुको आ–आफ्नै दावी
[email protected]: [email protected].com,